Fanarenana orinasa malagasy: nanaovana fanadihadiana manokana ny Lazan’i Betsileo | NewsMada
Nangatahin’ireo manana petra-bola ao amin’ny orinasa Lazan’i Betsileo sy izay mpiara-miombona antoka aminy ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria any Fianarantsoa hanao ny kajim-pitantanana momba ity orinasa ity. Ny Lazan’i Betsileo, tsiahivina fa mpamokatra divay, niforona ny taona 1971. Latsaka ao anaty krizy amin’izao fotoana izao.
Ny herinandro lasa teo, nandritra ny efatra andro nanaovana fanadihadiana amin’ny antsipiriany ny olana rehetra ao amin’ny Lazan’i Betsileo, nofantarina momba izay rehetra mampihodina ny orinasa: ny olona, ny vola, ny fitaovana, sns. Samy manao tatitra tandrify azy ny sampana fitantanana mpiasa, teknika, famokarana. Navondrona ireo rehetra ireo ho “état fancier” ahitana ny zava-misy manontolo.
Tamin’ny taona 2007, tonga tany Matsiatra Ambony ny filankevitra any Bourgogne, Frantsa. Nampahafantarina tamin’io fotoana io ny tokony hanarenana ny Lazan’i Betsileo. Tanjona ny fanatsarana ny kalitaon’ny divay vokarina, ahitana tombombarotra ho tombontsoan’ny mpiasa sy ny fianakaviany. Nefa mbola tsy tafarina hatramin’izao ity orinasa nanana ny lazany ity ka izao alefa indray any amin’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria izao. Tafiditra ao anatin’ny politika fanomezan-danja ny orinasa malagasy izao fanarenana ny Lazan’i Betsileo izao. Mampahafantatra hatrany ny vokatra vita malagasy sy manome asa ho an’ny eto an-toerana.